चुम्बन पनि १३ प्रकारका रहेछन् – जानी राख्नुस चुम्बन गर्ने तरिका ! « News24 : Premium News Channel
चुम्बन पनि १३ प्रकारका रहेछन् – जानी राख्नुस चुम्बन गर्ने तरिका !
माया जनाउनका लागि प्रेमी प्रेमीकाले एक अर्कालाई गर्ने मायालु स्पर्श हो चुम्बन, म्वाइँ अनि किस। यसले सम्बन्धमा मायाको आभाष दिलाउँछ।चुम्बन सिर्फ केटाले केटीलाई, प्रेमीले प्रेमिकालाई वा श्रीमानले श्रीमतीलाई र एवं रितले एक आपसमा गर्ने माया साटासाटको शैली वा तरिका मात्र होइन। चुम्बन भनेको निकटता र माया देखाउने प्रक्रिया वा क्रियाकलाप भएकाले आफूभन्दा ठूला सानामा लिंग र सम्बन्धको भेद नराखी पनि गर्न सकिन्छ, गरिन्छ। साना बालबालिकालाई मायाले मानिसहरु गाला वा निधारमा चुम्बन गर्दछन् त्यसो त आफ्ना छोराछोरी भाई बहिनीलाई पनि गाला तथा निधारमा चुम्बन गर्ने गरिन्छ। यी सबै आफ्नो मनमा रहेको उनीहरु प्रतिको मायाको प्रस्फुटन हो। तर एउटा प्रेमी वा श्रीमान्ले देखाउने माया फरक हुने भएकाले उनीहरु बीच आदान प्रदान हुने चुम्बन पनि फरक खालको नै हुन्छ।
फिल्ममा हिरो हिरोइन बीचको माया प्रेमलाई चरमबिन्दुमा देखाउनका लागि चुम्बनको प्रयोग गरेको देखेर धेरैलाई लाग्छ प्रेमिका या श्रीमतीलाई चुम्बन गर्न म जान्दछु। तर धेरै पुरुष तथा महिलालाई चुम्बन गर्न नै आउँदैन। जसका कारण उनीहरु प्रेम अनि सम्बन्धको मजा लिनबाट चुकिरहेका हुन्छन्। यहाँ चुम्बनका १३ प्रकार र चुम्बन गर्ने तरिका बताइएको छः
१. नित्तिक चुम्बन
यो चुम्वन बिशेषगरी सुहागरातमा पतिद्धारा पत्नीलाइ गरिने चुम्वन हो । सुहागरातमा पतिले पत्तीको मुहार पहिलो पटक देखेको हुनाले पति सुन्दर पत्नी पाएकोमा हर्षित हुदै पत्नीका ओठ लगायत हरेक अंगमा चुम्वन गर्दछ तर पत्नी भने प्रथम पटकमा लज्जाको कारणले केही पहल गर्दिनन खालि आनन्द मात्र लिन्छीन । यस्तो प्रकारको चुम्वनलाइ नित्तिक चुम्वन भनिन्छ ।
पतिले आफ्नो नवविवाहीता पत्नीको ओठमा आफ्ना ओठ राखिदिने र पत्नीलाई चुम्वनको लागि अनु्रोध गर्दछन तर पत्नी भने लाजले चुम्न नसकेर कामी मात्र रहन्छीन यस्तो चुम्वनलाइ स्फुरित चुम्बन भनिन्छ ।
नव विवाहिता पत्नी आफ्नो पतिको चुम्वनबाट आत्मविभोर भएर आफ्ना आँखाहरु बन्द गरि हातले पतिका आखा छोपेर पतिको ओठमा आफ्नो जिव्रो रथडछिन पतिले पनि यस्तै गर्दछ भने यस्तो चुम्वनलाइ घट्टितक चुम्बन भनिन्छ ।
पति पत्नीमा समान भाव छ र एक आपसमा चुम्वनको जवाफ चुम्वनले नै दिन्छन र मजा लिन्छन भने यस्तो चुम्वनलाइ समचुम्वन भनिन्छ ।
एकान्तमा बसिरहेका दम्पती मध्ये कुनै एक जनाले उठेर आफ्नो पति वा पत्नीलाइ पछाडिबाट समाती मुखलाइ आफुतिर घुमाएर चुम्वन गर्दछ भने यस्तो चुम्वनलाई उद्भ्रान्त चुम्बन भनिन्छ ।
६.अब पिडितक चुम्बन
पति पत्नीले एक आपसमा एक अर्कालाइ बेस्करी अठ्याएर च्यापेर चुम्वन गर्दछन । यस्तो चुम्वन कामवेग प्रचन्ड भएको समयमा हुने भएकाले यसबाट अत्याधिक पीडा हुन्छ । तर पनि पिडाको अनुभव भने हुदैन यस्तो चुम्वनलाइ अब पिडितक चुम्बन भन्ने गरिन्छ ।
७. उत्तर चुम्बन
पति पत्नी मध्ये एउटाले शरिरको कुन ठाउमा ओठमा निधारमा गालामा वा अन्यत्र भागमा जहा चुम्वन गर्दछ त्यहि चुम्वन गरेर फर्काउनेलाइ उत्तर चुम्वन भनिन्छ ।
८. प्रतिबोधक चुम्बन
पति वा पत्नी निदाइरहेको मौकामा कुनै एक पक्षले मुखमा चुम्वन गर्दछन भने त्यस्तो चुम्वनलाइ प्रतिवोधक चुम्वन भनिन्छ ।
जव दम्पतिले कसैको छायाँलाइ ऐनामा देखेर वा तस्बिरमा फोटो चुम्वन गर्छिन भने यस्तो चुम्वनलाइ छायाँ चुम्वन भनिन्छ ।
यो चुम्वनको एक तिव्र प्रकार हो । यसमा पति पत्नी बिच घम्सा घम्सी हुन्छ लुठाचुडी हुन्छ । पत्नीले शुरुमा पतिलाइ शरिरका सबै अंगमा चुम्न नदिने प्रयत्न गर्छिन तर अन्त्यमा सबै शरिर चुम्नको लागि समर्पीत गर्दछिन यसलाइ द्युत चुम्वन भनिन्छ ।
११.राग संदिपक चुम्बन
राती निदाइरहेकी पत्नीले कामवासनाको कारण आफ्ना मस्त निदाइरहेका पतीलाइ ब्युझाउनको लागि मुखमा चुम्वन गर्न थाल्दछिन भने यस्तो चुम्वनलाइ राग संदिपक चुम्वन भनिन्छ ।
पतीको ध्यान अन्यत्र रहेको बेला सम्भोगको लागि उसलाइ तयार पार्ने चुम्वन हो यो । प्राय जसो पत्नीहरुले कामातुर अवस्थामा यस्तो चुम्वन गर्ने गर्दछिन । यस चुम्वनलाइ चलितक चुम्वन भनिन्छ ।
पति पत्नी अलग अलग स्थानमा बसेर मुख घुमाउदै चुम्वन गर्दछन भने यस्तो चुम्वनलाई तिर्यक चुम्वन ।